Inqubomgomo yobumfihlo - Forex Lens
Umhlinzeki wesevisi ngeke aqashe, athengise, afinyelele noma nganoma iyiphi indlela asebenzisa imininingwane yamakhasimende yekhasimende. Le mininingwane izogcinwa iyimfihlo ngendlela ephakeme kakhulu.
Siqoqa amakheli e-imeyili alabo abaxhumana nathi nge-imeyili, bahlanganise imininingwane yokuthi yiluphi amakhasi abathengi abangena noma abavakashela, indawo cishe, ikheli le-IP, nolwazi oluzinikelwe ngumthengi (njengolwazi lokuhlola kanye / noma ukubhaliswa kwesiza) .Lwazi esikuqoqayo kusetshenziselwa ukwenza ngcono okuqukethwe amakhasi e-Web kanye nekhwalithi yensizakalo yethu.
Sicela imininingwane efana negama lakho, igama lenkampani, ikheli le-imeyili, ikheli lokukhokha kanye nemininingwane yekhadi lesikweletu yabasebenzisi bezinsizakalo zethu. Sisebenzisa imininingwane eqoqiwe ngezinhloso ezijwayelekile ezilandelayo: ukuhlinzekwa kwemikhiqizo nezinsizakalo, ukukhokhisa, ukukhomba nokuqinisekisa, ukuthuthukiswa kwezinsizakalo, ukuxhumana, kanye nocwaningo.
Ikhukhi inani elincane ledatha, okuvame ukufaka okokuhlonza okwehlukile okungaziwa, okuthunyelwa kwisiphequluli sakho kusuka kumakhompyutha wewebhusayithi futhi kugcinwe kwi-hard drive yekhompyutha yakho. Amakhukhi ayadingeka ukusebenzisa insizakalo yethu. Sisebenzisa amakhukhi ukurekhoda imininingwane yeseshini yamanje, kepha ungasebenzisi amakhukhi angunaphakade.
Sisebenzisa abathengisi beqembu lesithathu kanye nabambisene nabo ukusingatha ukuhlinzeka ngehadiware eyanele, isoftware, ukuxhumana kwenethiwekhi, isitoreji kanye nobuchwepheshe obuhlobene obudingekayo ukwenza izinsizakalo ezinikeziwe. Noma singumnikazi wekhodi, imininingwane kanye nawo wonke amalungelo kuhlelo, ugcina wonke amalungelo kudatha yakho.
Singadalula imininingwane ekhonjwayo uqobo ngaphansi kwezimo ezikhethekile, njengokuhambisana ne-subpoenas noma lapho isenzo sakho sephula imigomo yesevisi.
Ngezikhathi ezithile singabuyekeza le nqubomgomo futhi sikwazise ngezinguquko ezibalulekile kwindlela esiphatha ngayo imininingwane yomuntu siqu ngokuthumela isaziso ekhelini le-imeyili eliyisisekelo elichazwe kwi-akhawunti yakho noma ngokubeka isaziso esiphambili esizeni sethu. Lokhu kufaka phakathi ukudluliswa kwedatha emcimbini Forex Lens itholwa noma ihlanganiswe nenye inkampani.
Le nqubomgomo yobumfihlo ihlanganiswe ukuze isebenze kangcono labo abakhathazekile nokuthi i-'Untu uqobo Lubonakala Kanjani '(PII) isetshenziswa kanjani online. I-PII, njengoba ichazwe emthethweni wobumfihlo wase-US kanye nokuphepha kwemininingwane, ingulwazi olungasetshenziswa ngokwalo noma ngolunye ulwazi ukukhomba, ukuxhumana, noma ukuthola umuntu oyedwa, noma ukukhomba umuntu ngokomongo. Uyacelwa ukuthi ufunde inqubomgomo yethu yobumfihlo ngokucophelela ukuze uthole ukuqonda okucacile kokuthi siqoqa, sisebenzisa, sivikela kanjani noma sihlangabezana kanjani neminye imininingwane eqondakalayo yomuntu siqu ngokuhambisana newebhusayithi yethu.
Yimiphi imininingwane yomuntu esiyiqoqa kubantu abavakashela ibhulogi yethu, iwebhusayithi noma uhlelo lokusebenza?
Lapho u-oda noma ubhalisa esizeni sethu, njengoba kufanele, ungahle ucelwe ukuba ufake igama lakho, ikheli le-imeyili, ikheli le-imeyili, inombolo yocingo, imininingwane yekhadi lesikweletu, inombolo yokuphepha komphakathi, i-Custom Fields noma eminye imininingwane ukukusiza ngolwazi lwakho.
Siqoqa nini ulwazi?
Siqoqa imininingwane evela kuwe lapho ubhalisa esizeni sethu, ubeka i-oda, ubhalisela incwadi yezindaba, uphendula inhlolovo, ugcwalisa ifomu, Sebenzisa i-Live Chat, Vula iTikiti lokusekelwa noma ufaka imininingwane esizeni sethu.
Sinikeze impendulo emikhiqizweni yethu noma kumasevisi wakho Pheqa
Sisebenzisa kanjani ulwazi lwakho?
Singasebenzisa ulwazi esiqoqa kuwe uma ubhalisa, uthengi, ubhalisele i-newsletter yethu, uphendule ucwaningo noma ukuxhumana kokukhangisa, ukuvakashela iwebhusayithi, noma ukusebenzisa ezinye izici zesayithi ngezindlela ezilandelayo:
• Ukuze wenze isipiliyoni sakho ngokwakho futhi usivumele ukuba sihambise uhlobo lokuqukethwe nemikhiqizo yomkhiqizo onentshisekelo kakhulu.
• Ukuthuthukisa iwebhusayithi yethu ukuze sikusize kangcono.
• Ukusivumela ukuba sisebenze kangcono ekuphenduleni izicelo zakho zamakhasimende.
• Ukuphatha umncintiswano, ukukhushulwa, ukuhlola noma esinye isici sesici.
• Ukucubungula ngokushesha ukuthengiselana kwakho.
• Ukucela ukulinganisa nokubuyekezwa kwamasevisi noma imikhiqizo
• Ukuze ulandele nabo ngemuva kwezingxoxo (bukhoma ingxoxo, i-imeyili noma imibuzo yefoni)
I-website yethu iskenwa njalo ngezimbobo zokuphepha nokukhubazeka okuyaziwayo ukuze wenze ukuvakasha kwakho kusayithi lethu kube ephephile ngangokunokwenzeka.
Sisebenzisa i-Malware Scanning ejwayelekile.
Ukwaziswa kwakho komuntu siqu kuqukethe amanethiwekhi avikelekile futhi kufinyeleleka kuphela ngenani elinganiselwe labantu abanamalungelo okufinyelela okukhethekile kulezi zinhlelo, futhi kudingeka ukuthi ulwazi luyimfihlo. Ngaphezu kwalokho, lonke ulwazi olubucayi / lwekhredithi oyinikezayo lubethelwe nge-Technology Secure Socket Layer (SSL).
Sisebenzisa izindlela ezihlukahlukene zokuphepha uma umsebenzisi ebeka umyalelo, ungena, noma ufinyelele ulwazi lwawo ukuze ulondoloze ukuphepha kolwazi lwakho lomuntu siqu.
Yebo. Ama-cookies amafayela amancane ukuthi isayithi noma umnikezeli wezinsizakalo uyadlulisela ku-hard drive yedokhumenti yakho ngokusebenzisa isiphequluli sakho seWebhu (uma uvumela) esenza izinhlelo zesayithi noma zezinsizakalo zithole isiphequluli sakho futhi zithinte futhi zikhumbule ulwazi oluthile. Ngokwesibonelo, sisebenzisa amakhukhi ukusisiza sikhumbule futhi sisebenze izinto enqoleni yakho yokuthenga. Zisetshenziselwa ukusisiza ukuthi siqonde izintandokazi zakho ngokusekelwe kumsebenzi wangasese wangasese noma wamanje, okwenza sikwazi ukukunikeza amasevisi athuthukisiwe. Siphinde sisebenzise amakhukhi ukusisiza ukuba sihlanganise idatha ehlanganisiwe mayelana nesayithi le-traffic kanye nokusebenzisana kwesayithi ukuze sikwazi ukunikeza ama-site namathebhu kangcono esikhathini esizayo.
Sisebenzisa amakhukhi ku:
• Siza ukhumbule futhi usebenze izinto ezisenqoleni yokuthenga.
• Qonda futhi ulondoloze okuthandwa ngumsebenzisi kokuvakashelwa okuzayo.
• Gcina ithrekhi yezikhangisi.
• Hlanganisa idatha ehlanganisiwe mayelana nesayithi ye-traffic kanye nokusebenzisana kwesayithi ukuze unikeze ama-site angcono namathuluzi wesayithi esikhathini esizayo. Singasebenzisa nezinsizakalo ezithembekile zenkampani yangaphandle ezilandelela lolu lwazi esikhundleni sethu.
Ungakhetha ukuthi ikhompiyutha yakho ikuxwayise njalo uma ikhukhi ithunyelwa, noma ungakhetha ukuvala wonke amakhukhi. Ukwenza lokhu ngokusebenzisa izilungiselelo zesiphequluli sakho. Njengoba isiphequluli sihluke kakhulu, bheka Imenyu Yesekelo yesiphequluli sakho ukuze ufunde indlela efanele yokushintsha amakhukhi wakho.
Uma abasebenzisi bekhubaza amakhukhi esipheqululini sabo:
Uma ucima amakhukhi kuzocisha ezinye zezici zesayithi.
Asithengisi, asithengisi, noma asidluliseli kwamanye amaqembu imininingwane yakho engaziwa ngaphandle kokuthi sinikeze abasebenzisi inothi ngaphambi kwesikhathi. Lokhu akubandakanyi ababambisene nabo bewebhusayithi namanye amaqembu asisiza ekusebenzeni iwebhusayithi yethu, ekuqhubeni ibhizinisi lethu, noma ekunikezeleni abasebenzisi bethu inqobo nje uma labo bantu bevumelana ukugcina lolu lwazi luyimfihlo. Futhi singakhipha imininingwane lapho kudedelwa kufanelekile ukuthobela umthetho, sisebenzise izinqubomgomo zethu zesayithi, noma sivikele amalungelo ethu noma abanye amalungelo, impahla noma ukuphepha.
Kodwa-ke, ulwazi olungabonakali lwabavakasheli olungabonakali lunganikezwa kwamanye amaqembu ukukhangisa, ukukhangisa, noma ezinye izinsiza.
Ngezinye izikhathi, ngokuqonda kwethu, singabandakanya noma sinikeze imikhiqizo noma izinsizakalo zenkampani yangaphandle kwiwebhusayithi yethu. Lezi zamasayithi wesithathu zinezinqubomgomo zobumfihlo ezihlukile futhi ezizimele. Ngakho-ke asikho umthwalo wemfanelo noma umthwalo wokuqukethwe kanye nemisebenzi yalezi zingosi ezixhunyiwe. Noma kunjalo, sifuna ukuvikela ubuqotho besayithi lethu futhi siyakwamukela noma yikuphi umbiko ngalezi zingosi.
Izidingo zokukhangisa ze-Google zingafingqwa yizimiso zokukhangisa ze-Google. Zibekiwe ukuze zinikeze ulwazi oluhle kubasebenzisi. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en
Sisebenzisa Ukukhangisa kwe-Google AdSense kuwebhusayithi yethu.
I-Google, njengomdayisi wesithathu, isebenzisa amakhukhi ukukhonza izikhangiso kusayithi lethu. Ukusetshenziswa kwe-Google kwekhukhi ye-DART kwenza sikwazi ukuhambisa izikhangiso kubasebenzisi bethu ngokusekelwe ekuvakasheni kwangaphambilini kusayithi lethu nakwamanye amasayithi ku-inthanethi. Abasebenzisi bangakhetha ukuphuma kwekhukhi ye-DART ngokuvakashela inqubomgomo yobumfihlo ye-Google Ad ne-Content Network.
• Ukumaketha kabusha nge-Google AdSense
• Ukubikwa kokubika kwe-Google Display Network
• Ukubika kwabantu kanye nezintshisekelo
• I-DoubleClick Platform Integration
Thina, kanye nabathengisi benkampani yangaphandle, njenge-Google sebenzisa amakhukhi okuqala (njengama-cookies we-Google Analytics) kanye namakhukhi wesithathu (njenge-cookie ye-DoubleClick) noma amanye ama-identifier ahlangene ndawonye ukuqoqa idatha ngokuphathelene nokusebenzisana komsebenzisi ukubonakala kokukhangisa kanye neminye imisebenzi yesikhangiso sokukhangisa njengoba ihlobene newebhusayithi yethu.
Abasebenzisi bangabeka izintandokazi zendlela i-Google ikukhangisa ngayo usebenzisa ikhasi le-Google Ad Settings. Ngaphandle kwalokho, ungakhetha ukuphuma ngokuvakashela ikhasi le-Network Advertising Initiative Opt Out noma usebenzisa i-Google Analytics Opt Out Out Browser.
ICalOPPA umthetho wokuqala wombuso esizweni odinga amawebhusayithi ezentengiso nezinsizakalo eziku-inthanethi ukuthumela inqubomgomo yobumfihlo. Ukufinyelela komthetho kudlulela ngaphesheya kweCalifornia ukuthi kudinge noma yimuphi umuntu noma inkampani e-United States (futhi mhlawumbe kube ngumhlaba) osebenza amawebhusayithi aqoqa imininingwane yomuntu uqobo evela kubathengi baseCalifornia ukuthumela inqubomgomo yobumfihlo ebonakalayo kuwebhusayithi yayo esho imininingwane eqoqiwe kanye nalabo abantu noma izinkampani okwabelwana ngazo. - Bona okuningi ku: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
Ngokusho kukaCalopPA, siyavumelana nalokhu okulandelayo:
Abasebenzisi bangavakashela isayithi lethu ngokungaziwa.
Uma ngabe le nqubomgomo yobumfihlo isunguliwe, sizofaka isixhumanisi kuso ekhasini lethu lasekhaya noma okungenani, kukhasi lokuqala elibalulekile ngemuva kokufaka iwebhusayithi yethu.
Isixhumanisi senqubomgomo yethu yemfihlo sifaka igama elithi 'Ubumfihlo' futhi sitholakala kalula ekhasini elishiwo ngenhla.
Uzokwaziswa nganoma yiziphi izinguquko zeNqubomgomo Yobumfihlo:
• Ku-Inqubomgomo Yobumfihlo yethu Page
Ungashintsha ulwazi lwakho lomuntu siqu:
• Ngokuthumela i-imeyili
• Ngokungena ngemvume ku-akhawunti yakho
Isitifiketi sethu sesayithi Ungahambisani namasignali?
Siyahlonipha Musa ukulandelela izimpawu futhi Ungalandeli, tshala amakhukhi, noma sebenzisa ukukhangisa uma inqubo yesiphequluli se-Do Not Track (DNT) isendaweni.
Ingabe isayithi lethu livumela ukulandelela kokuziphatha komuntu wesithathu?
Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi sivumela ukulandela kokuziphatha kweqembu lesithathu
I-COPPA (Umthetho Wokuvikela Ubumfihlo ku-Intanethi)
Uma kukhulunywa ngokuqoqwa kwemininingwane yomuntu siqu evela ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-13 ubudala, umthetho Wezingane Wokuvikela Ubumfihlo Kwe-Intanethi (COPPA) ubeka abazali ekuphathweni. I-Federal Trade Commission, i-ejensi yokuvikela abathengi e-United States, isebenzisa umthetho we-COPPA, ocacisa lokho okusetshenziswa ngabasebenza amawebhusayithi nezinsizakalo eziku-inthanethi ukuvikela ubumfihlo bezingane nokuphepha online.
Asikathengi ngqo kubantwana abangaphansi kweminyaka yobudala be-13.
Izenzo Zolwazi Oluhle
I-Fair Information Practices Principles yakha umgogodla womthetho wobumfihlo e-United States futhi imibono abafaka ngayo iye yaba nendima ebalulekile ekuthuthukiseni imithetho yokuvikela idatha emhlabeni wonke. Ukuqonda Izimiso Zokuziphatha Zolwazi Oluhle nokuthi kufanele baqaliswe kanjani kubalulekile ukuhambisana nemithetho ehlukahlukene yobumfihlo evikela ulwazi lomuntu siqu.
Ukuze sihambisane nemikhuba ye-Fair Information Practices sizoyithatha isinyathelo esilandelayo sokuphendula, uma ukwephulwa kwedatha kwenzeka:
• Ngosuku lwebhizinisi le-1
Sizokwazisa abasebenzisi ngesaziso sesayithi
Sivumelana neSimiso Sokulungiswa Kwamanye Abantu esidinga ukuthi abantu banelungelo lokuphishekela ngokomthetho amalungelo abambelelekile kubathelisi bezintambo nabacwaningi abahluleka ukunamathela emthethweni. Lesi simiso asidingi nje kuphela ukuthi abantu banamalungelo okuphoqelela abasebenzisi bezintatha, kodwa futhi ukuthi abantu basebenzisa izinkantolo noma izinhlangano zikahulumeni ukuphenya futhi / noma ukushushisa ukungahambisani nabacubungula idatha.
I-CAN SPAM Act
Umthetho we-CAN-SPAM ngumthetho obeka imithetho ye-imeyili yezohwebo, ubeka izidingo zemilayezo yezentengiselwano, unikeza abamukeli ilungelo lokuba nama-imeyili ayeke ukuthunyelwa kubo, futhi uchaza izijeziso ezinzima ngokuphulwa.
• Thumela ulwazi, phendula imibuzo, kanye / noma ezinye izicelo noma imibuzo
• Imiyalo yenqubo nokuthumela ulwazi nezibuyekezo eziphathelene nemiyalo.
• Ukuthumele ulwazi olwengeziwe oluhlobene nomkhiqizo wakho kanye / noma isevisi
• Imakethe ohlwini lwethu lokuposa noma uqhubeke ukuthumela ama-imeyili kumakhasimende ethu ngemuva kokuthengiswa kwangempela.
Ukuze kuhambisane ne-CANSPAM, siyavumelana nalokhu okulandelayo:
• Ungasebenzisi izihloko ezingamanga noma ezidukisayo noma amakheli we-imeyili.
• Thola umyalezo njengesikhangiso ngendlela enengqondo.
• Faka ikheli langempela lebhizinisi lethu noma indlunkulu yesayithi.
• Gada amasevisi wokumaketha we-imeyili we-third party ukuze ulandele, uma esisetshenziswa.
• Hlonipha izicelo zokuphuma / ukuzikhipha ohlwini ngokushesha.
• Vumela abasebenzisi ukuba bazikhiphe ohlwini ngokusebenzisa isixhumanisi phansi kwe-imeyili ngayinye.
Uma nganoma isiphi isikhathi ungathanda ukuzikhiphe ohlwini ngokuthola ama-imeyili esizayo, ungasithumela i-imeyili ku-
• Landela imiyalo ngezansi kwe-imeyili ngayinye.
futhi sizokususa ngokushesha KONKE izincwadi.
Uma kukhona imibuzo mayelana nale nqubomgomo yobumfihlo, ungathintana nathi usebenzisa ulwazi olungezansi.
EToronto, Ontario M5B2M6
Kugcine ukuhlelwa ku-2018-05-23